Best उत्तम अनुप्रयोगहरू जुन वास्तविक समयमा कपालको रंग परिवर्तन गर्दछ 🥇 Emulator.online ▷ 🥇
कपालको रंग परिवर्तन गर्ने अनुप्रयोग दुबैलाई रमाईलो गर्न र तपाइँका साथीहरूलाई बेवकूफ बनाउन र तपाइँलाई कुन छायाँको र paint लगाउने निर्णय गर्न मद्दतको लागि उपयोगी छ। यी अनुप्रयोगहरूले तपाईंलाई सैलूनमा जानुभन्दा पहिले नयाँ दृश्यमा प्रयास गर्न अनुमति दिन्छ, प्रायः वास्तविकतामा। त्यसकारण पछि पछुताउनुपर्ने खतरा कम हुन्छ।
१. कपालको रंग
कपाल रंगले र colorको विभिन्न शैलीहरू प्रदान गर्दछ, जस्तै ट्रिपलेट, ओस्कोरो, हुर्किसकेका वा सबै कपाल मा। अनुप्रयोग खोल्दा, प्रयोगकर्ताले क्यामेराबाट छविको सामना गर्दछ, तर सेलफोनबाट फोटो प्रयोग गर्न पनि सम्भव छ। स्क्रीनको तल रंगहरू मात्र चयन गर्नुहोस्।
त्यहाँ साहसी विकल्पहरू छन्, जस्तै हरियो, बैजनी, निलो र सबैभन्दा सामान्य व्यक्तिहरूको विभिन्न शेडहरू, जस्तै गोरा, खैरो र रातो। अनुप्रयोगले तपाइँलाई वास्तविक समयमा छविहरू तुलना गर्न स्क्रिन विभाजन गर्न पनि अनुमति दिन्छ। यद्यपि सहज छैन, केवल फोटो लिनको लागि स्क्रिनमा छुनुहोस् वा छुनुहोस् र भिडियो रेकर्ड गर्न समात्नुहोस्।
कपालको रंग (नि: शुल्क, in-app खरीदको साथ): एन्ड्रोइड | आईओएस
२. फेबी लुक
वास्तविक समयमा तपाईं नयाँ कपालको रंगको साथ कसरी हेर्नुहुनेछ पत्ता लगाउनुहोस्
फेबी लुक एक प्रयोगात्मक गुगल अनुप्रयोग हो जुन विशेष रूपमा कपालको र hair्ग परिवर्तन गर्नका लागि सिर्जना गरिएको हो। स्वरको अनुप्रयोग वास्तविक समयमा देखा पर्दछ। केवल कुञ्जी छुनुहोस् र समय परिवर्तन हेर्नुहोस्। त्यहाँ क्लासिक विकल्पहरू छन्, जस्तै गोरा, रातो, खैरो र खैरो, कम पारम्परिक पनि, जस्तै निलो, गुलाबी, सुन्तला, आदि।
यदि तपाईंलाई परिणाम मनपर्दछ भने, तपाईं स्क्रिनको बिचमा शटरमा फोटो खिच्न सक्नुहुनेछ र सजिलैसँग फेसबुक, इन्स्टाग्राम, स्न्यापचट, र अन्यमा साझा गर्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रमसँग जटिल कार्यहरू छैन, तर न त यो अनुकूलन वा सम्पादन स्रोतहरू छ।
Fabby look (नि: शुल्क): एन्ड्रोइड | आईओएस
इन्स्टाग्राम कपालको रंग परिवर्तन गर्नका लागि विशेष अनुप्रयोग होईन, तर यसमा धेरै फिल्टरहरू छन् जुन तपाईंलाई वास्तविक समयमा नयाँ शेडहरू लागू गर्न अनुमति दिन्छ। यो गर्न, केवल कथाहरू जानुहोस्, प्रभाव पट्टीबाट दायाँ देखि बाँया स्क्रोल गर्नुहोस्, सबै मार्ग अन्तमा। त्यसोभए तपाईले विकल्प देख्नुहुनेछ खोज प्रभावहरू, कि तपाइँ छुनु पर्छ।
स्क्रिनमा देखा पर्दा, दायाँको स्क्रीनको शीर्षमा अवस्थित म्याग्निफाइ glass ग्लास आइकनमा जानुहोस्। खोजी फाँटमा सर्तहरू प्रविष्ट गर्नुहोस् रंगीन कपाल o कपालको रंग र तपाईले फिल्टर विकल्पहरूको संख्या देख्नुहुनेछ जुन प्रकार्यहरू प्रस्ताव गर्दछ।
तपाईंलाई मनपर्ने डी प्ले गर्नुहोस् र त्यसपछि अनुभव गर्न। तपाईंलाई कथाहरू प्रकाशन स्क्रिनमा लगिनेछ, जहाँ तपाईं फोटोहरू लिन र भिडियोहरू रेकर्ड गर्न सक्नुहुनेछ, जस्तो तपाईं अरू कुनै फिल्टरसँग गर्नुहुन्छ।
गाईड इन्स्टाग्राम कथाहरूमा लुकेका फिल्टरहरू र प्रभावहरू - कसरी फेला पार्ने हेर्नुहोस् ट्यूटोरियल विस्तृत मा वर्णन गर्दछ।
इन्स्टाग्राम (नि: शुल्क): एन्ड्रोइड | आईओएस
K-POP हेयरस्टाइल सिम्युलेटर
हेयरफिट दक्षिण कोरियाका K-Pop संगीत विधाको कलाकारहरूको कपालबाट प्रेरित छ। अनुप्रयोगले तपाईंलाई अनुमति दिन्छ माथि जानुहोस् ग्यालरीबाट फोटो लिनुहोस् वा घटनास्थलमा लिनुहोस्। प्रयोगकर्ताले पहिले कपाल काट्नु पर्छ र त्यसपछि जारी राख्नु पर्छ र d्ग पिच परिवर्तन गर्न।
त्यहाँ दर्जनौं र options्ग विकल्पहरू उपलब्ध छन्, लिन्क, गुलाबी, बैजनी, र हरियो जस्ता ट्रेंडी सहित। दुबै केश र र color्ग सम्भव भएसम्म प्राकृतिक देखिन समायोजित गर्न सकिन्छ।
कपाल (नि: शुल्क): एन्ड्रोइड
You. YouCam मेकअप
मेकअप प्रभावहरूमा केन्द्रित भएता पनि, YouCam मेकअपसँग वास्तविक समयमा कपालको रंग परिवर्तन गर्न एक उन्नत सुविधा छ। प्रयोगकर्ताले दुई-र color्ग शैलीहरू प्रयोग गर्न सक्दछ, उनीहरूको वास्तविक छायासँग मेल खान, वा केवल एक छायाँ लागू गर्न।
तपाईं तीव्रता, चमक, साथै रंग कभरेज समायोजन गर्न सक्नुहुनेछ वा यसको मूल स्वरमा कति मिश्रण गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईंलाई परिणाम मनपर्दछ भने, अनुप्रयोगले तपाईंलाई मात्र फोटो लिनको लागि मात्र होइन, फिल्टरको साथ भिडियोहरू रेकर्ड गर्न पनि अनुमति दिन्छ।
YouCam मेकअप (नि: शुल्क, in-app खरीदको साथ): एन्ड्रोइड | आईओएस
Hair. कपाल रye
कपालको रye डाईले तपाईंलाई स्थानमा फोटो लिन वा पुस्तकालयमा उपलब्ध फोटो प्रयोग गर्न अनुमति दिन्छ। त्यसो भए, प्रयोगकर्ताले छविमा, कपालको क्षेत्र छनौट गर्नुपर्दछ र त्यसपछि टोनमा छुनुपर्दछ जुन उसले लागू गर्न चाहान्छ। तपाइँ सबै र paint लगाउन र अरू केही थोरै सेन्डमा थप्नको लागि एउटा र choose छनौट गर्न सक्नुहुन्छ।
यदि तपाईं चाहनुहुन्छ भने, तपाईं विकल्प प्रयोग गरेर आफ्नै रंग पनि सिर्जना गर्न सक्नुहुनेछ रंग थप्नुहोस्। परिणाम फोनमा बचत गर्न सकिन्छ वा अन्य अनुप्रयोगहरूमा साझेदारी गर्न सकिन्छ।
कपाल रye (नि: शुल्क, in-app खरीदको साथ): iOS
Hair. कपालको रंग परिवर्तक
कपालको र Chan्ग परिवर्तनकर्तासँग एन्ड्रोइडका लागि हेयर कलर डाईसँग मिल्दोजुल्दो प्रस्ताव छ। अनुप्रयोगले तपाईंलाई ग्यालरीबाट फोटोहरू प्रयोग गर्न अनुमति दिन्छ वा तिनीहरूको स्थानमा लैजान्छ। त्यसोभए केवल इच्छित रंगमा ट्याप गर्नुहोस् र यसलाई तपाईंको औंलाले कपाल क्षेत्र माथि लागू गर्नुहोस्। समान छविमा धेरै टोनहरू लागू गर्न र फोटोको अन्य तत्त्वहरू पनि रंगाउन यो सम्भव छ।
साथै, प्रयोगकर्ता र the्ग को तीव्रता परिवर्तन गर्न सक्दछ, प्रभाव अधिक यथार्थवादी बनाउँदै। एप्लिकेसनले सामाजिक नेटवर्कमा परिणाम साझेदारी गर्न वा यसलाई उपकरणमा बचत गर्न विकल्पहरू प्रदान गर्दछ। तपाईंलाई यसलाई पाँच तारा दिन आग्रह गरिएको हुन सक्छ। तपाईंले स्रोतको पहुँच गर्न यसो गर्नुपर्दैन।
कपालको रंग परिवर्तक (नि: शुल्क): एन्ड्रोइड
राम्रो हेयरकट र कलर सिमुलेटर लुक परिवर्तन गर्न
अनुप्रयोगले तपाईंको लि gender्ग परिवर्तन गर्दछ र तपाईंलाई पुरुष वा महिला बनाउँछ; कसरी प्रयोग गर्ने हेर्नुहोस्
अनुप्रयोग जुन मेकअपको साथ मद्दत गर्दछ